UGQIRHA NGUBANI MONSTER OMTSHA OTYHILEKILEYO KUTHOTHO LWE-13 EKUZINGELENI UBUNCWANE - INZULULWAZI
Ugqirha Ngubani ohla kuqala ukujonga i-monster entsha emva kokuzingela ubutyebi kwi-Intanethi
Emva kweeveki zemikhondo ekrelekrele kunye neekhowudi ezifihliweyo, ugqirha Ngubani abalandeli baye ekugqibeleni bayigqobhoza #FumanaUgqirha imfihlakalo, ukulandelela ixesha likaJodie Whittaker's Lord kunye nokufumana imiyalezo embalwa ekhethekileyo evela kumfazi ngokwakhe.
Kodwa nangakumbi ngokungathandekiyo, ukuzingelwa kobutyebi (okwabona abalandeli becacisa rhoqo-ukukhupha iingcebiso ukuvula ipaswedi ekhethekileyo) banokutyhila ukujonga okokuqala kwi-monster entsha kuthotho lwe-13, kunye neziqeshana ezimfutshane ezifakwe kwilizwi phakathi ugqirha kunye no-Yaz (Mandip Gill).
Blink kwaye uya kubakhumbula, kodwa esiphelweni sale fowuni ungabona ukukhanya okumbalwa- kwamehlo amnyama, afihliweyo kwaye atshonile abekwe kwisikhumba esingwevu kunye namazinyo abukhali, ahlabayo emlonyeni oxineneyo. Ichazwe yi-BBC njengokukhangela into engaqondakaliyo, kunzima ukucinga ukuba sibona enye into ngaphandle kotshaba olutsha lwasemzini olujamelene neqela le-TARDIS kule kwindla.
Ngokuqinisekileyo, kujongeka ngathi kuyothusa kakhulu - izikhundla ezisemva kwesofa ziyathandwa- kwaye ngothotho lwe-13 lubekelwe ukuba lube yinto engummangaliso ngakumbi, kusenokwenzeka ukuba sizakubona isuntswana elifanelekileyo lale baddie intsha kwiziqendu ezizayo. Ukucinga ukuba yinxalenye yezo ziqendu zitsha, ngaba oku kunokuba yinto enzima Iqela ukuba umboniso uChris Chibnall usilumkisile malunga nepaneli yamva nje? Nantoni na inokwenzeka.
Ewe, ngalo mgaqo kusenokwenzeka ukuba eli nani loyikisayo liyimfihlo ngokufihlakeleyo kwaye iqabane elitsha likaGqirha- ukubonakala kungakhohlisa, akunakugweba incwadi ngesigqubuthelo sayo okanye i-monster ngamazinyo ayo okusika inyama- kodwa ngokuhamba kukaWhittaker kusondela, asinakukunceda kodwa sizive ngathi ugqirha uhle ngendledlana emnyama endaweni yoko.
Ngaba uGqirha, uYaz noDan (uJohn Bishop) bangasinda kolu tshaba lutsha? Kwaye zithini izicwangciso zazo kubo? Ndiyathemba ukuba, akuyi kufuneka sigqibe omnye umzingeli omkhulu wokufumana i-intanethi ukufumana enye…
Ugqirha obuyela kwi-BBC One kule kwindla. Ngakumbi, jonga iphepha lethu leSci-Fi elizinikeleyo okanye Isikhokelo sethu seTV esipheleleyo.
uyifumana njani iNetflix
zingaphi uthotho ii blinders peaky
ndingawubukela phi umdlalo wokugqibela we-europa league
adele a. roberts ndingusaziwayo
ziphume nini ii-airpods
imidlalo yePremier League yaseAmazon